Dhibaatooyinka Ay Leedahay Qabyaalada – Q-1aad - Diblomaasi
Inta aanan u gudo galin dhibaatada ay leedahay qabyaalad, aan ka hadlo. “Maxay kala yihiin qabiil iyo qabyaalad?”. Qabiilka waa in aad ku abtirsataa awoowayaashaada taasina, way banaantahay oo xitTaa diinta Islaamka ina fartay, laakiin qabyaalad waa in qofka qabiilkiisa uu ku tageeraa dulmiga kana hormariyo dadka kale aygoon xaq u lahayn.
Taasina waa xaaraam uu ka digay Suubbanuhu ‘Sallah-laah Calayhi Wa-sallam.
Sababtoo ah diinta Islaamka ma qabto in qof Muslim ah dhibo walaalkiisa kale oo Muslim ah. Waathil bin al-asqas ayaa waydiyey Rasuulka SCW wuxuu ku yiri “Rasuulka Allow waa maxay qabyaalad?”
Rusuulka SCW wuxuu ku yiri “waa in aad beeshaada dulmi ku tageertaa”
Qabyaalada waa cudur mesha ay soo gashana way burburisaa. Bulsho kasto ka fogaato qabyaalada way hormartaa. Qabyaalada waxay leedahay dhibaatooyin badan aan ku soo koobi Karin hal maqaal Insha’Allah waxaan isku dayi donaa in aan ka dhigo maqaalo fara badan. Sababtoo ah qabyaalad waxay noo gaysatay burbur aad iyo aad u fara badan.
Akhristoo dhibaatada ay leedahay qabyaalada waxaa kaaga felan tusaale in manta meesha aan taganahay waxyaabihii ina keenay ay ka mid tahay qabyaalada, walina anan ka toobadkeenin oo an ku taaganahay qabyaalad. Qabyaalada meshay soo gasho waa baabiisaa, taasina waxaa ka arki kartaa qaaradaha isticmaalo say ka dhiktay. Qabyaalada inta badan waxaa isticmaalo qayba ka mid ah Afrika iyo Asiya, kuwa isticmaala waxay ku jiraan dhibaatooyin fara badan. . Qabyaalad ma ogolo aqoonyahanka am indheer garadka, waxay garab istaaktaa jahliga iyo xumaanta mana ogolo in ay bulshada hormarto. Dhibaatooyinka ay leedahay qabyaalada waxaa ka mid ah.
Sawir burburkii Muqdisho – Tukesomalism.com
1. Waa Qaran Dumis: waxaan ula jedaa dal dhisan hadii uu bilaawo in uu isticmaalo qabyaalad waxaa mesha ka baxa cadaalada iyo nidaamka kala dambeentii jirtay, mar hadii ay taasi dhacdo qarankaas wuu burburaa. Soomaaliya waxyaabah burburiye qarankeeda waxaa ka mid ahaa qabyaalada, inkastoo markii uu bilaawanaayey dagaalkii dowlada lagu burburiyey hadafyo kale duwan la lahaa sida isbedeldoon oo kale. Lakiin marke dambe arinta waxa ay isku bedeshay qabyaalad taasina waxay sababtay in ay waxii gacanta ka baxaan.
Dalka marka uu dhacay burburkiisan arintii waxay ku sii fogaatay qabiilaysi. Taasi waxay sababtay in ay dadka isku layaan qabiil qabiil oo uu midba midka uu ka xoog badanyahay dhulka ku daro. Mesha waxaa lagu wayey qarinkii, xaladana waysii adkaatay oo waxay taktay meel aan laga soo qawan Karin waayo wax walbo way burubureen. Kaliya qaran lama burburin oo dalka xitaa waa la burburiyey. Dhibaatadaas waxaa keenay waa qabyaalada, waxayna noqotay mid dadka madaxa ka sii gasha xitaa hadii la helay dowlad kale.
Soomaaliya ayodoo ay ogtahay waxyaabihii qarankeeda dumiyey in ay ka mid tahay qabyaalad wale kama soo laaban. Xitaa waxaan maqlay oo aan aqriyey inbadan wayadi uu wadanka haystay gumaystaha, inta anan la helin ururo awood badan oo xuriyada dhaliya, in ay jireen dad sameeyey isku dayo fara badan oo aan guulaysan sababtan ay aheed dadkaas looma arki jirin dad waxtar soo wado si loo garab istaago ee qabiil ahaan ayaa loo eegi jiray.
Gumaystaha xitaa wuxuu ka dhigan jiray hub dagaal qabyaalad soomaaliya ka dhaxayso, asogoo u isticmaalaayo soomaaliya in uu ku kala jar jaro si aysan wada jir wax isga celin, sababtoo ah soomaaliya qabyaalad ayey ku dhaqmi jirtay oo qabiil qabiil u kala go’aneed qaraka badakiisa.
Qofkii soo taago madaxa oo isbedel doon ah wuxuu u diri jiray dadka ayaga xambaarsan fikirkood oo soomaalida ka mid ah si ay u dhahaan ninkaan garab masiinayno waayo qabiil hebel ayaa ka dhashay. Ayagoo aminsan hadii u awood yeesho aduu ka hor imanaa oo gumaysto kaama dhicinaayo. Is aminadaas liidata waxaa sababy qabyaalad ka dhaxaysay ayag. Marka soomaaliya in badan ayey ka guuxaysaa qalbigeeda qabyaalad markuu dhacayna burburkii dowlad dib ayey u isticmaleen qabyaalada.
Waxaa burburiyey qarankeena oo nakala geyey midba meel waa qabyaalad. Qabyaalada waxay sababtay in lakaal taktago qaarkeen xabsi galaan qaarna qaxooti noqdaan qaar kalana la waayo oo qabyo iyo ruux meelay galeen. Intaas waxaa sii dheer in uu burburay wadan bilicdiisa iyo bulsahada dhaqaalaheeha. Intaas waxaa u sabab ah qarankoo burburay, qarankana qabyaaladaa burburiso oo waliba qaar inaga mid ah wale ay qoryihii qabyaalad ay sii shidayaan.
Waddan hadduu uu burburo qarakiisa wax u haraaba iska yar, waayo midowga umadaas waa qarankeeda. Soomaaliyey qabyaalad aan iska dhaafno oo aan qarankeena dib u soo ceshano si uu wax walbo dib noogo soo laabta. Waxaa hubaa umad haday ku dhaqanto cadaalad in ay wax walbo ha gaagi karaan, xitaa Allihii uuntaa uu u gargaari doona, lakin mar hadaan jirin cadaalad wax kale mab jiri doonan. Qabyaaladna meelay jirta cadaalad ka fok. Qarankeena waa dahab wooyo qoomiyda muslim ah ayaan nahay, dhulkeena waa hoddan ee aan iska ciribtirno qabyaalada.
Related Topics:Dhibaatooyinka Ay Leedahay Qabyaalada – Q-1aad